Manager akandinyangira neZIMBORO Rake – Nyini yangu yakaita kunge ichaputika! – Makuhwa.co.zw
Manager akandinyangira neZIMBORO Rake – Nyini yangu yakaita kunge ichaputika!
Pandakapinda basa rangu rekutanga ndakafara chaizvo zvekuti chero kumira nemusoro ndaimira. Saka ndini ndai cleaner office yamanager nekuona kuti makarongezwa sei. Manager akanditi i should always dress zvisexy kuitira panouya mavisitors kuoffice kwake. Ndakati zvishoma izvo ndokutanga hangu kuuya kubasa ndakauraya mucheno.
Manager vaigara vachindipa mari yelunch neyekuendesa kumba daily ini kana chandaiziva ndaifunga kuti ndozvinoitiwa kumunhu wose aripa basa apa.
Mumwe musi nadakati ndichipedza ku cleaner muoffice ndakavhunduka kunzwa manager vachindiudza kuti wakabatana Tindo ndikati thanks ndobva vandipa hug. Aizve ndivo pahuro ndi, ini ndikajamba kutiza nekuti ndanga ndisingazvifariri ini.
Vandibata zvehasha ndokundibvisa pent zvenharo ndobva vati mboro dhaaa mubeche ndakanga ndichi penga nhema kusvikira ndakuto koirawo ndanakirwa neZIMBORO. Tingangoti Manager akandinyangira neZIMBORO Rake MuOffice Nyini yangu yakaita kunge ichaputika.
Hamawee Ndakasvirwa zvandisati ndamboitwa neboy friend yangu. Vakarova ndakafongora vakaita mastyle ose akapera ndaingochemerera ndichiti “MANAGER KANI, IPAPO”.
Ndakabva ndazvambarara pacapert ndokubvura makumbo beche ndofunga akariona pachena ndawa mboro ichigumha mukatikati chaipo kurova pachibereko!
Ndakanakirwa vakomana kubva that day every Friday Manager vanondisvira muOffice
Related Topics:Manager akandinyangira neZIMBORO
Ndakazvambura Friend Yangu Stella neMboro kwete zvekutamba!!!
Ndakasvira kaBabe kepaFacebook muMovie – Mwana Ainaka Iyeye!!!